मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा | Margadarsannew.com
पोखरा । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहाँ कोटामात्रै पुगेन, मन्त्री मण्डलमा रेकर्ड कायम भयो । अघिल्लो सरकार हुँदा ७ जना मात्रै मन्त्री थिए । एमाले नेतृत्वकै सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍यायो । ७ बाट ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । अन्तिम समयमा फुटाइएको मन्त्रालयमा मन्त्रि पनि नियुक्त गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।
अहिले एमाले मात्रै विपक्षमा छ । एमालेसँग २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डोबाटेलाई सोमबारबिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सोमबार साँझ नै सपथ लिइसक्नुभएको छ । दशैं लगत्तै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि हेरफेर हुने बताइएको छ । डोबाटे साउन ८ मै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । अन्तिम समयमा उहाँको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेन ।
त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरुले संविधान र समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध सरकार गएको भन्दै आलोचना गरे । सरोकारवालाको चासो पनि मन्त्री परिषद् विस्तारमा गयो । चौतर्फी दवाव पछि नेपालीले डोबाटेलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उहाँ कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा गनिनुहुन्छ । तर प्रदेशसभामा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानल बलियो छ । मुख्यमन्त्री पौडेल समूहबाटै भए पनि आन्तरिक दवावका कारण उहाँले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन सक्नुभएको थिएन ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि सल्लाह नै नगरी उहाँले मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । मन्त्री नियुक्त भएपछि डोबाटेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
मन्त्रालयको टुंगो छैन । सपथ खाएँ । अब संविधानले जे भनेको छ, मुख्यमन्त्रीज्यूले जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ । त्यही पुरा गर्छु । संविधानले दिएको अधिकारकै अधिनमा रहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन भूमिका खेल्छु ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउनु र तपाईं मन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा कुनै तादात्म्यता छ ? कि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो । त्यहाँ कुरा भयो । मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटें । अरु कुरा त गरिनँ । आशीर्वाद मागें । प्रधानमन्त्री र सभापतिलाई कार्यकर्ताको हैसियतले भेट्नु सामान्य भयो । मैले आशीर्वाद चाहियो हजुर भनें । उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो । मन्त्री भएँ । खुशी छु । दशैंको बेला मागेको आशीर्वाद लाग्दोरहेछ । मलाई पूरा भयो । एउटा विश्वास नै त रहेछ आखिर ।
त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । तर सल्लाह होला । मैले यो देउ भनेर भएन । सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारले छिट्टै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।